Fifandirana: Ny Cloud controversial
Na dia mety tsy fantatrao aza ny oram-batravatra amin'ny anarana, dia mety ho hitanao imbetsaka izany. Ny lalan'ny rahona hita any ambadiky ny fiaramanidina avaratra mandalo, ny hafatra sy ny smiley ny tarehin'ny sary amin'ny lanitra amin'ny fahavaratra; Ireo no ohatra amin'ny fako.
Ny teny hoe "contrail" dia fohy ao amin'ny lalan-dalan'ny condensation , izay midika hoe ahoana no mahatonga ny rahona ao ambadiky ny lalan-tsoan'ny fiaramanidina.
Ny hodiny dia heverina ho rahona avo be .
Mipoitra ny lava-tery sy ny tery, fa ny haavony, ny rahona ny rahona, matetika miaraka amin'ny roa na maromaro mifanelanelana (ny isa dia mifamatotra amin'ny isa masinà (alikaola) na elatra manana). Ny ankamaroan'izy ireo dia rahona tsy misy fohy, maharitra maharitra minitra maromaro alohan'ny hivoahany. Na izany aza, arakaraka ny toetr'andro, mety ho azy ireo ora farany na andro maromaro mihitsy aza. Ireo izay vao farany dia miparitaka amin'ny tabilao misy cirrus, fantatra amin'ny hoe contrail cirrus.
Inona no miteraka fanoherana?
Ny fanoherana dia mety amin'ny endrika roa: amin'ny fampiasana ny vovo-drano eny amin'ny rivotra avy amin'ny fipoahan'ny fiaramanidina iray, na amin'ny fiovan'ny tampoka rehefa mitroka ny elatry ny fiaramanidina.
Famotehana dipoavatra: Ny lamosina fanindroany no karazana trondro mahazatra indrindra. Rehefa mampiasa fiaramanidina mandritra ny sidina ny fiaramanidina, dia mivoaka avy ao anaty fiara ny fanaintainana, mamoaka gazy karbonika, vovon-drano, ary midina ao anaty rivotra. Noho io rivotra mafana sy malefaka io miaraka amin'ny rivotra mangatsiaka dia mihamangatsiaka ary mandoka amin'ny rosia sy solifara mba hanamboarana rahona eo an-toerana. Satria mitaky segondra vitsivitsy ny rivotra mahamay, dia lasa lavitra kely ny fiaramanidina. Izany no mahatonga ny banga hita matetika eo amin'ny rambony sy ny fiandohan'ny rahona.
Ny tendron'ny elatry ny rivotra : Raha ny hafanana sy ny hatsiaka loatra ny rivotra dia mety hiteraka ihany koa ny rivotra. Ny rivotra mitsingevana eo amin'ny elatra dia manana tsindry ambany noho izay mitete eo ambaniny, ary satria ny rivotra dia manidina avy any ambony mankany ambany, ny rivotry ny rivotra dia miala avy eo amin'ny elatra farany ambany mankany ambony. Ireo hetsika ireo dia mamorona tavoahangy misy rivotra, na vortex, amin'ny tendron'ny elatra. Ireo vortices ireo dia faritra voan'ny otrikaina sy ny hafanana ary mety hitarika ny vovo-drano hidiran-doza.
Koa satria ny rivotra dia mitaky rivotra mafana (avoakan'ny haavony) hanombohana, dia matetika izy ireo no hita any amin'ny haavon'ny haavon'ny toerana avo kokoa, ny rivotra dia mafana kokoa, manify kokoa, ary afaka mitondra vongan-drano bebe kokoa.
Mitondra ny fiovan'ny toetrandro?
Na dia heverina fa misy fiantraikany kely fotsiny amin'ny toetr'andro ny fifandonana , ny fiantraikany amin'ny fandaharam-potoana isan'andro dia mbola manan-danja kokoa. Rehefa miparitaka sy marefo ny endriny mba hamorona contrair cirrus, dia mampiroborobo ny androany (ny alberto avo lenta dia maneho ny taratra fampidirana masoandro avy any ivelany) ary ny fiakaran'ny hafanana amin'ny alina (ny rahona matevina dia mibontsina ny taratra lavitry ny tany lavitr'ezaka). Ny halehiben'io fiakaran'ny mari-pamantarana io dia heverina ho ambony noho ny fiakaran'ny hafanana.
Tsara homarihina koa fa ny fananganana ny fatiantoka dia mifamatotra amin'ny famoahana gazy karbonika, izay gazy mahatsiravina sy mpandray anjara maneran-tany .
Rahona mampiady hevitra
Ny olona sasany, anisan'izany ireo mpandàla ny fikomiana, dia manana ny heviny manokana momba ny antoko sy ny tena izy. Raha tokony hikorontana izy ireo, dia mino izy ireo fa ho lasibatry ny zavatra simika, na "chemins", izay niparitaka avy amin'ireo fikambanana governemanta ho an'ireo olom-pirenena tsy misy dikany. Miady hevitra izy ireo fa alefa any amin'ny atmosfera ireo entana ireo mba hifehezana ny toetr'andro, ny fitantanana ny mponina, ary ny fitsapana fitaovam-piadiana biôlôjia, ary ny fiheverana ny fijery toy ny rahona tsy manimba.
Araka ny hevitry ny fisalasalana, raha toa ka misy lozam-pifamoivoizana na tic-tac-toe, na hita amin'ny toerana izay tsy misy lozam-pifamoivoizana, dia misy ny vintana tsara fa tsy fifanarahana mihitsy izany.
Tantara of Composites
Fantaro ny fomba fametrahana ireo karazana sarobidy samihafa
M na M? Fifandirana eo amin'ny Molarity sy Molality
Fanavakavahana amin'ny fihanaky ny fo - Redox
Ahoana ny fiasan'ny labozia amin'ny andro firavoravoana?
Fotoan-tsarotra ve: Ny zava-misy marina na mety?
Ahoana ny famakiana barometera
Ny Chemistry dia tokony hanontany tena
Inona ny Rotisserie?
Famoronana sy tsingerintaona malaza tamin'ny Febroary
Inona no Zavatra Sarotra Indrindra?
Sary hosodoko amin'ny Akrylika
Ny fomba fisaoran'ny fiangonan'ny Pilgrims ao amin'ny Thanksgiving
Inona no atao hoe fitandremana?
Fianarana IELTS Free ao amin'ny Internet
Fomba hanamboarana kristaly mainty
Biographie an'i Daniel Ellsberg
5 Novaina Pejy manokana
Chapman GPA, SAT sy ACT Data
Inona no atao hoe Formula Rydberg?
Tetik'ady mahafinaritra sy mahomby amin'ny famporisihana ny mpampianatra Morale
Ahoana no hahazoanao tapakila maimaim-poana amin'ny 'Show Hate Show with James Corden'
25 Fahalalahana hafahafa, adaladala, ary mahagaga
Notificar que residente que pied de familiare que convied en ciudadano
10 mahatalanjona ny bioluminescent
SAT Scores amin'ny fidirana ao amin'ny Colleges of Utah efa-taona
Ny drafitry ny Master Wonder for Ground Zero, 2002
Ny famoronana ravana
Mpihira, fiderana ary kamboty
Hery tsy fantatra (kabary)
Iza amin'ireo mpilalao asiatika no nahazo loka Akademia?
Miakanjo tahaka ny hafa amin'ny hazakazaka samihafa ho an'ny Halloween